FILOHA RAJOELINA TAO TOAMASINA : Hovitaina ny Miami, Stadium Barikadimy, kianja monisipaly
Taorian’ny naha-voafidy azy ho Filohan’ny Repoblika dia io fitsidihana nataon’ny Filoha Rajoelina tao Toamasina, omaly alahady 17 marsa sy anio alatsinainy io no fitsidihana ofisialy voalohany nataon’ ny Filoha Andry Nirina Rajoelina tao Toamasina. 17 mars 2019
Fitsidihana maro sosona no nataony tamin’ izany. Ny alahady 17 marsa tamin’ny 2ora sy 50 mn no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy ny fiaramanidina nitondra azy.
Hisintonana mpizaha tany
Avy hatrany dia nihazo ny seranan-tsambon’i Toamasina nijery ny fahatongavan’ny vary mora nentin’ny sambo Jessie ny lehilahy. Vary izay efa tonga ny tolakandron’ny sabotsy 16 marsa. Fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena fony izy mbola kandidà izy io. Vary ho fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka. Mahatratra 16 500 taonina ny vary tonga. Ny 10 000 taonina mijanona ao Toamasina fa ny 6 500 taonina halefa any Toliara. Nanambara ny Filoha fa isaky ny alarobia sy sabotsy no hivarotana ny vary, ka amidy amin’ny antsasa-bidy raha mitaha amin’ny vidim-bary eny an-tsena izany. Vary izay tsara kalitao fa tsy araka ny feo aelin’olona sasany fa ratsy izany. Nohafarana avy tany Karachi-Pakistan izy io.
Taorian’ny fandraisana ny fahatongavan’ny vary mora, dia nijery ny fanitarana ny seran-tsambon’i Toamasina ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fitsidihana notarihin’ny Tale jeneralin’ny Spat Avellin Christian Eddy. Mandeha ny asa. Fanitarana ny seranana izay fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana Malagasy sy ny governemanta japoney.
Nitohy tao amin’ny kianja monisipaly ny dian’ny Filoham-pirenena. Nambarany nandritra izany fa havadika ho kianja mitafo manara-penitra ny kianja monisipaly. Efa vita ny drafitra(plan) momba izany. Afaka herinandro vitsy, dia hanomboka ny tolo-bidy. Afaka roa volana raha ela indrindra, dia hanomboka ny fanorenana. Nomarihin’ny Filoham-pirenena fa tsy mendrika ny vahoakan’i Toamasina ny kianja mitafo Soavita, izay efa potika tanteraka ka izany no nahatonga azy nanapa-kevitra hanamboatra kianja mitafo manara-penitra eo amin’ny toeran’ny kianja monisipaly. Mahazaka mpijery 2 000 ny kianja mitafo kianja monisipaly rehefa vita.
Tsy vitan’izay ihany koa fa mbola hasiana toeram-pivarotana taozavatra malagasy eny amin’ny sisin’ ny kianja mitafo haorina io. Sady manome endrika ny tanànan’i Toamasina izany no sehatra anehoana ireo asa tanana mampalaza an’i Toamasina ahafahana misintona mpizaha tany, hoy ny Filoham-pirenena.
Ho vasoka ireo mpanatsatso
Namaranany ny diany tao Toamasina ny andron’ ny alahady 17 marsa, ny fihaonana tamin’ny vahoakan’i Toamasina mivantana tao amin’ny Stadium Barikadimy. Stadium Barikadimy izay efa feno hipoka tanteraka. Liana tamin’ny kabary nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ireo vahoaka maro be. Vahoaka tsy nokaramaina tahaka ny fanaon’ny fitondrana teo aloha fa vahoaka noentanim-pitiavana liana amin’ny asa fampandrosoana entin’ny Filoham-pirenena.
Nandritra ny lahateny nataony, nampahatsiahy momba ny vary mora ny Filoha. Nambarany fa izay lazainy dia tsy maintsy ataony. Ny olon-drehetra dia afaka mividy io vary mora io. Hafaliana no nandraisan’ny vahoaka maro be ny teny nataon’ ny Filoham-pirenena fa hovitaina alohan’ny 26 jona izao ny Stadium Barikadimy. Efa tonga ireo injeniera hanatanteraka ny fanohizana ny asa. Ankoatra ny kianja filalaovam-baolinina, dia hasiana kianja ho an’ny atletisma ihany koa. « Hataontsika tena manara-penitra », hoy hatrany ny Filoha. Momba ny fako ao Toamasina, nilaza ny Filoham-pirenena fa hodiovina i Toamasina. Handefasna trakitera sy fitaovana fanasina fako i Toamasina. Hamboarina ireo lavadavaka amin’ny lalana.
Momba ilay tetikasa ho fanaovana ny morondranomasin’i Toamasina ho tahaka ny any Miami Etazonia, dia nilaza ny Filoha nandritra ny kabary nataony fa « ho vasoka ireo mpanatsatso ». Tena hotanterahina ny tetikasa, hoy ny Filoha. Anio alatsinainy 18 marsa no hijery ny moron-dranomasina ny Filoha miaraka amin’ireo tekinisianina manam-pahaizana momba izany. Hatomboka ny asa, hoy ny hatrany ny Filoha.
Nomarihiny fa roa volana izay no nitondrany ny firenena saingy kosa efa misy azo tsapain-tanana ny asa vita. Anisany tetikasa hoentina eto Toamasina ny fananganana “autoroute” avy ao amin’ny seranantsambon’i Toamasina mivoaka eny amin’ny lalam-pirenena faharoa.
Hatomboka afaka roa volana sy tapany ny asa.
Noresahin’ny Filoham-pirenena nandritra io fihaonana mivantana tamin’ny vahoakan’i Toamasina io koa ny momba ny vidin-jiro. Nambarany fa efa nitondra tekinisianina manokana izy hijery vahaolana manoloana ny fidangan’ny vidin-jiro.
Lasa modely i Madagasikara amin’izao fotoana izao, hoy ny Filoha. Nolazainy nandritra izao fandalovany tao Toamasina izao fa nanasa azy ho vahiny manokana amin’ny fankalazana fetim-pirenena any amin’ izy ireo amin’ity taona ity ny filoha Senegaley sy ny Filohan’i Mozambika.
Fantatra ihany koa fa anisany hojereny eto Toamasina anio alatsinainy 18 marsa ny momba ny tetikasa fanorenana trano mora vaovao. Velirano anisany nataony nandritra ireny fampielezan-kevitra ireny.